VaZuma Votumira Zvakare Nhumwa Dzavo kuZimbabwe
Mbudzi 16, 2010
Mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vakatumira nhumwa dzavo kuHarare kuti dziite misangano nevatungamiri vehurumende yemubatanidzwa kuti vayedze kugadzirisa gakava rinotyisa riri munyika.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, nemutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vave nemwedzi wose vasina kutaura vose. Izvi zvinotevera humbimbindoga hunonzi hwakaitwa naVaMugabe apo vakadoma magavhuna ematunhu vachityora chibvumirano chehurumende yemubatanidzwa cheGlobal Political Agreement, kana kuti GPA.
Nekowo dare reSenate rakambomira kusangana kusvika gore rinouya sezvo maseneta eMDC inotungamirwa naVaTsvangirai ari kuti haasi kutambira kupinda mudare iri kwemagavhuna ematunhu akadomwa naVaMugabe.
Ari kutungamira chikwata chekuSouth Africa, Amai Lindiwe Zulu, vakaita misangano neMuvhuro naVaMugabe naVaTsvangirai panguva dzakasiyana.
NeChipiri vange vachiita hurukuro naVaMutambara.
VeMDC vanoti vakaudza nhumwa idzi kuti vari kuda gwara rakajeka rekuita sarudzo, kumiswa kwemhirizhonga, uye kuti VaMugabe vasatenderwa kuenderera mberi nezvavakaita zvekudoma magavhuna, vamiriri veZimbabwe kune dzimwe nyika uye vatongi vachityora zvinodiwa neGPA.
VeZanu-PF vanoti kuti izvi zviitwe panofanira kubviswa zvirango kana kuti poitwa sarudzo nechimbichimbi poita hurumende imwe chete inenge ichitonga nyika.
Mashoko ekuti paitwe sarudzo nechimbi chimbi akatsinhirwawo negurukota rezvemitemo, uye vari nhengo yeZanu PF, VaPatrick Chinamasa.
Asi mutevedzeri waVaChinamasa, vari nhengo yeMDC yaVaTsvangirai, VaObert Gutu, vanoti VaChinamasa vari kurota. Asi VaTsvangirai pachavo vari kutiwo vakagadzirira kupinda musarudzo chero nguva, uye panofanirwa kunge pasina mhirizhonga.
Mutauriri weZanu-PF, VaRugare Gumbo, vanoti semaonero avo, nyika haifanirwe kumhanyira kuita sarudzo kana zvinhu zvisina kumira zvakanaka.
Sachigaro weNCA, VaLovemore Madhuku, vanotiwo zviri kuitwa naVaZuma kupedza nguva kurovera hoko padehwe retsindi.